FIFANINANAM-PIRENENA AN-TSEKOLY :: Ho mafy kokoa ny fitsirihana ireo mpangala-taona • AoRaha
FIFANINANAM-PIRENENA AN-TSEKOLY Ho mafy kokoa ny fitsirihana ireo mpangala-taona
Hanamafy ny fomba rehetra hoentina mitsirika ireo fangalaran-taona amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny fanatanjahantena an-tsekoly, ny minisiteran’ ny Fanabeazam-pirenena sy ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, mpikarakara ny hetsika. Isan’ireny ny fametrahana tahirin-kevitra momba ireo mpifaninana ka hohamarinina amin’ izany ny taonan’izy ireo.
Hotanterahina any Toliara, amin’ny 28 septambra hatramin’ny 8 oktobra, ho avy izao, ny fifaninanam-pirenena an-tsekoly, taorian’ny nanaovana izany tany Mahajanga, tamin’ny taon-dasa. “Tanjona ny hanapariahana izany amin’ireo faritra rehetra manerana ny Nosy”, araka ny nambaran’ny mpikarakara, omaly, teny Ampefiloha.
Ankizy sy tanora roa arivo, manodidina ny roa ambin’ny folo hatramin’ ny fito ambin’ny folo taona no handray anjara amin’ity fifaninanam-pirenena an-tsekoly ity. Taranjam-panatanjahantena dimy (atletisma, baolina kitra, basket-ball, handball ary volley-ball) no hifaninanana, mandritra ireo fotoana ireo. “Hampi- avaka ny fifaninanam-pirenena amin’ity taona ity ny fisian’ny fampirisihana an’ireo tovovavy handray anjara amin’ny baolina kitra. Hisy ny fifaninanana ho an’ny zazavavy roa ambin’ny folo hatramin’ ny telo ambin’ny folo taona, ka homena mari-pankasitrahana manokana ho an’ireo atleta sy ekipa mendrika”, hoy hatrany ny mpikarakara. “Hotiliana amin’izany ireo manan-talenta sy ho avin’ny fana- tanjahantena malagasy”, araka ny voalaza hatrany.
Ankoatra ireo hetsika ara-patanjahantena dia hanamarika ny fifaninanam-pirenena ihany koa ny fanasongadinana ireo kolontsaina isa-paritra handraisan’ireo mpandray anjara.
Baolina kitra Be mpiandry ny Barean’i Madagasikara
Lomano Notampohin’ny fiovam-potoana ireo mpilomano malagasy
Fanatanjahantena • Tapatapany
Baolina kitra – Barea
Handball – Nodimandry Rasendra
Poa-basy nirefodrefotra teny Anosibe :: Olona telo voalaza fa jiolahy maty voatifitry ny pôlisy
FANADINANA BAKALÔREA :: Sazy henjana no miandry ireo izay tratra manao hosoka
Fampiharana ny lalàm-panorenana Hametra-pialana anio ny governemanta Ntsay Christian
Fiainana mpilalaon’ny barea “Efa safidy fony kely ny ho mpilalao matihanina”, hoy i Melvin Adrien
Fitsenana makotrokotroka Noraisin’ny Malagasy nanoatra noho ny tompondaka ny Barea
Fahatongavan’ny ekipam-pirenena Hotsenaina makotrokotroka ny Barean’i Madagasikara